‘हटस्पट’ उदयपुर भुल्के – Health Post Nepal
‘हटस्पट’ उदयपुर भुल्के
२०७७ वैशाख ९ गते २३:०२
कोरोना संक्रमण : विश्वभरि २६ नेपालीको मृत्यु, ११ सय ६६ संक्रमित
उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटबाट तीन किलोमिटर टाढा छ, भुल्के गाउँ।
त्रियुगा नगरपालिकाको-३ मा रहेको यो सानो गाउँमा एउटा मस्जिद छ, वरिपरि ६० घरजति मुस्लिम समुदाय र करिब १० घरजति अरू समुदायको बस्ती।
केही दिनअघि यो मस्जिदमा बसिरहेका १२ जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। तीमध्ये ११ जना भारतीय नागरिक हुन्, जो केही महिनाअघि धार्मिक यात्राका क्रममा त्यहाँ आइपुगेका थिए। एकजना त्यहीँका मुस्लिम थिए।
त्यसपछि यहाँ परीक्षण बढाइएको थियो। परीक्षणका क्रममा मंगलबार थप ११ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ।
यद्यपि, उनीहरू सबैको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, उदयपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर बुढामगरका अनुसार मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये आठजना स्थानीय पहिला संक्रमित देखिएका १२ जनासँगै बसेर नमाज पढेका थिए।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भुल्केमा नेपाली सेनाको १८ नम्बर बाहिनी पनि स्थापना भएको छ, जो मस्जिददेखि करिब ३ सय मिटरमात्रै टाढा छ।
भुल्केबाट सदरमुकाम गाईघाटमा हरेक दिन सयौं लिटर दूध, हरियो तरकारी आइपुग्छ।
भारतको नयाँदिल्लीबाट आएका ती मुस्लिम सुनसरीको दुहबी, सप्तरीमा र उदयपुरका चारवटा मस्जिदमा घुम्दै त्यहाँ बस्न आइपुगेका थिए।
उनीहरूले दैनिक नमाजदेखि अन्य धार्मिक प्रवचनसमेत आयोजना गर्ने गरेका थिए भने त्यस्तो भेलामा सयौं मुस्लिम धर्मावलम्बी भेला हुने गरेका थिए।
उनीहररू गत फागुन ३, ४ र ५ गते सप्तरीको बोदेबर्साइनमा आयोजना भएको मुस्लिम धार्मिक सभामा सहभागी भएका थिए। त्यसपछि सप्तरीको फत्तेपुरमा बसेर, उदयपुरको चौदण्डीगण्डी नगरपालिका–५ स्थित सिवाहीको मदरसामा बसेका थिए भने चैत ४ गते भुल्केको मस्जिदमा बसेका थिए।
भारतबाट आएका ती १२ जनाको समूहमा मोरङबाट चारजना थपिएर १६ जनाको समूह उदयपुरको त्यही मस्जिदमा बस्दै आएका थिए।
उनीहरू चैत ४ गते आएर त्यहाँ बसेकाबारे स्थानीयले १४ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराए पनि प्रशासनले कुनै ठोस कदम चालेको थिएन।
भुल्केबाहेक उदयपुरमै थप अर्का एकजनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ, उनी कुन स्थानका हुन् भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले खुलाएको छैन।
संक्रमितहरू पहिचान भएको मस्जिद वरपर बस्ने सबै परिवारको स्वाब परीक्षण भइसकेको छैन। पहिलो चरणमा परीक्षण भएका मुस्लिम समुदायका ६० र अन्य समुदायका नौजनाको नमुनामध्येबाट पछिल्लो संक्रमण पुष्टि भएको हो।
भुल्केमा सोमबारसम्म प्रायः घरमुलीको मात्रै नमुना लिएर परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। हालसम्म नेपाली सेनासहितको टोलीले कूल २ सय ५२ जनाको मात्र नमुना लिएर परीक्षणका लागि पठाएको छ। मंगलबार अपराह्नसम्म देखिएका नौमा थप दुईजनामा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको हो।
संक्रमित सबैको कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। हाल पुष्टि भएकाको उमेर १८ देखि ५८ वर्ष छ। उनीहरूमध्ये नौजना पुरुष र दुई महिला हुन्।
योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४२ पुगेको छ।
एकै पटक ११ जनामा संक्रमण देखिएसँगै त्रियुगा नगरपालिका–३ भुल्केमा मात्र संक्रमितको संख्या २३ पुगेको छ।
संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै त्यहाँबाट बढी आवतजावत हुने मोतिगढा, सोनुवा, मिलनचोक, मोथियाही, गाईघाटलगायत क्षेत्रका स्थानीयवासी त्रासमा छन्।
संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै प्रदेश १ सरकारले उदयपुरलाई पूर्णरूपमा लकडाउन गरेर व्यापक परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। उदयपुरले सिरहा, सप्तरी,
सुनसरी र सिन्धुलीसम्म छुने भए पनि अहिले जिल्लाका तीन नगरपालिका क्षेत्रमा बढी जोखिम देखिएको छ।
‘अब र्‍यापिडले मात्रै हुँदैन, पिसिआर टेस्ट नै गर्नुपर्छ’
विज्ञहररू उदयपुरको अवस्था अब तेस्रो चरण (समुदायस्तरमै) पुगिसकेको बताउँछन्। उनीहरूले अब पूरै इलाका सिल गरेर पिसिआर विधिबाट परीक्षण बढाउन पनि सुझाव दिएका छन्।
‘उनीहरु केही हप्ता पहिला नै आएको र त्यो बेलै संक्रमण भइसकेको देखिन्छ। यो भारतबाट तत्कालै आएको भएर देखिएको होइन, पहिला नै संक्रमण भइसकेको देखिन्छ र, त्यो त्यहीँबाट सरेको हो भन्ने प्रष्ट छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल भन्छन्, ‘अब यो हटस्पट नै भइसक्यो। र्‍यापिड टेस्टले मात्रै भन्दा पनि अब पिसिआर विधिबाटै धेरैभन्दा धेरै परीक्षण बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’
उनका अनुसार अब त्यो पूरै जिल्लालाई नै केही दिनसम्मै सिल गरेर पिसिआर परीक्षण नगर्ने हो भने स्थिति झन् भयावह हुनसक्छ। ‘पूरै लकडाउन गर्ने, एरिया सिल गर्ने अनि पिसिआर विधिमा जाने हो, र्‍यापिडले मात्रै अब हुँदैन भन्ने प्रष्ट भइसक्यो,’ डा. प्याकुरेलले हेल्थपोस्टनेपालसँग भने।
Tags: उदयपुर, काेराेना